by न्युज डेस्क ३१ जेष्ठ २०७८ ००:०५ 14 June 2021 0
नायिका कट्रिना कैफ नायक रणवीर कपुरसँगको प्रेम सम्बन्धमा ब्रेक लागेपछि केही समय तनावमा रहिन् । यसपछि, आफ्नो जीवनलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउँदै गरेकी कट्रिना पछिल्लो केही महिनादेखि भने नायक विक्की कौशलको प्रेममा छिन् । तर, कैफ आफ्नो प्रेमको खबरलाई छताछुल्ल पार्ने मुडमा भने छैनन् ।
यसैले, यसपटक प्रेमलाई गोप्य रुपमा नै अगाडि बढाउने सोच उनको छ । तर, केही दिन अगाडि नायक हर्षवर्धन कपुरले नायिका कैफ र नायक कौशल प्रेम सम्बन्धमा रहेको पुष्टी गरिदिएका थिए । प्रेम सम्बन्ध सार्वजनिक भएपछि कैफ नायक कपुरसँग रिसाएकी छिन् । हर्षवर्धन र कट्रिनाविच खासै नजिकको सम्बन्ध छैन ।
अर्कोतिर, कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत बिषयमा कुरा गर्नका लागि अनुमती लिनुपर्ने वुझाई कैफको छ । हर्षवर्धनलाई आफ्नो निजी बिषयमा बोल्ने अधिकार नभएको भन्दै कट्रिना उनीसँग रुष्ट बनेकी हुन् । केही सार्वजनिक कार्यक्रममा एकसाथ देखिएपछि कट्रिना र विक्कीको प्रेम चर्चा बलिउडमा सुरु भएको थियो ।
‘रुद्र’ मा इशा
न्युज डेस्क ३० असार २०७८ २३:३२ 14 July 2021
न्युज डेस्क २५ असार २०७८ २१:०७9July 2021
SQL requests:205. Generation time:3.260 sec. Memory consumption:15.81 mb